Umthengisi weethambiso we-Assay we-Assay, umzi-mveliso odumileyo, umzobo we-clay giphite-ttlceramic
Liling Xing Tai Long Special yodongwe Co., Ltd. yasekwa ngo-1997, ngokukodwa uphando kunye nophuhliso, mveliso umlilo kulingwa ngokuyinyibilikisa kunye cupel.
Iimveliso asetyenziswa uhlalutyo elinqabileyo metal, uvavanyo laboratory kwemigodi, izimbiwa, akukulinga kunye akukulinga negolide. Umlilo kulingwa crucibles eziphathekayo nto fireclay axutywe nezinye izinto elinjubaqa, bakwazi ukumelana ubushushu ukuya ku 1300 ℃. Bona enokumelana elihle ekuhlaselweni wampompoza, ukhukhuliseko, ngokuhlaziya kunye nokothuka thermal.
Njengomvelisi enamandla ngobuchule lomlilo kulingwa ngokuyinyibilikisa kunye cupel, kufuneka isakhiwo 7000 square metres ezintsha mveliso kunye umgca wemveliso oluzenzekelayo.
Le nkampani njalo ngqo umgangatho ukusinda, enkuthazo kunye nophuhliso, isidima lophawu, ukukhusela kunye namashishini inkonzo olunovelwano emva-intengiso njengoko njongo. Ukutyhubela iminyaka, iimveliso zethu wathengisa kakuhle kulo lonke eli lizwe, kwaye zithunyelwa eJamani, United States, Brazil, Russia, Mexico ... kumazwe angaphezu kwama-20, umgangatho imveliso kunye nenkonzo banconywa kakhulu ngabathengi.
"Superior umgangatho, ixabiso preferential '' na imfundiso yolawulo wethu. thina ngokunyanisekileyo silindele ukuba basebenzisane kunye kwinginginya kubathengi basekhaya amazwe, uphuhliso eqhelekileyo! Wamkelekile ukuba batyelele kwaye baphande wenkampani yethu.
Alibaba's elishumi nyaka--high-high-mpahla
Thina umgca imveliso ngokupheleleyo kwakunye nezixhobo zivavanywa, kuquka umgca imveliso oluzenzekelayo
Thina iqela lethu ukuze uphando, uyilo, imveliso kunye wathengisa
Siye kudlule IS0 9001: 2005. standard, ezinzile, ethembekileyo
Ubudlelwane bokusebenzisana olusondeleyo abathengi yenza iqela lethu ukuba ukunikezela amakhulu inkonzo leyo yesibini ukuya namnye.
Thina inkampani kudityaniswe R & D, imveliso kunye neentengiso ngokupheleleyo
iimveliso zethu wafumana ubabalo oluvela zombini markets.They basekhaya kunye nolwamanye amazwe ngoku uku rhweba ngaphandle ku kumazwe 200 ngokubanzi.
Into yokuqala esimele siyenze ukuba ukuhlangana nabathengi bethu kunye nentetho ngokusebenzisa iinjongo zabo kwiprojekthi elizayo.
Ebudeni bale ntlanganiso, uzive ukhululekile ukunxibelelana izimvo zakho kwaye ubuze ezininzi imibuzo.